သီချင်းတွေကပေးတဲ့ အားအင် (Khant’s Playlist) In:Kawi Inspires, Movies | Books | Apps
ဂီတက စွမ်းအားကြီးပါတယ်။ ဂီတက သင့်ကို စိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သလို၊ အားအင်တွေလည်း ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သီချင်းတွေက စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျှော့ချဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ခံစားချက်တွေပြောင်းလဲတာ မြန်ဆန်လွန်းတဲ့ ကျွန်တော့်လို လူတစ်ယောက်အတွက် တစ်နေ့တာကိုဖြတ်သန်းတဲ့အခါ သီချင်းတွေက အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ကျွန်တော် စိတ်အားတက်ကြွမှုနဲ့ အားအင်တွေလိုအပ်လာတဲ့အခါ Hardstyle နဲ့ Psy Trance သီချင်းအမျိုးအစားတွေကို နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကသီချင်းတွေကတော့ ကျွန်တော် စိတ်အားတက်ကြွမှုနဲ့ အားအင်တွေလိုအပ်လာတဲ့အခါ အများဆုံးနားထောင်ဖြစ်တဲ့ သီချင်းတွေပါ။ 1. For Ever – Zatox 2. Come Running – Darren Styles 3. The Truth – ReOrder & Exis 4. Us Against the World – Darren Styles 5. Save Me – Darren Styles 6. Be Here Now – Brennan Heart & Jonathan Mendelsohn 7. F.T.F.M.F. – Coone and Zatox စိတ်ဓာတ်တွေအောက်ဆုံးထိရောက်နေပြီး ဘာမှလုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီသီချင်းတွေကို နားထောင်လေ့ရှိပါတယ်။ 1. Stand Out Fit In – ONE OK ROCK 2. This Is Me – Keala Settle 3. Wasted Nights – ONE OK ROCK 4. The Nights – Avicii 5. Breakaway – Kelly Clarkson 6. မင်းအတွက်မင်း – Idiots 7. Masterpiece – Jessie J ကျွန်တော်တို့ရဲ့ audience တွေကရော စိတ်ဓာတ်တက်ကြွဖို့ ဘယ်လိုသီချင်းအမျိုးအစားတွေနားထောင်လေ့ရှိလဲဗျ? Comment ထဲမှာပြောပြပေးသွားပါဦး။ ကျွန်တော်တို့လည်းနားထောင်ကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့! ...
သင်္ကြန်ကို အိမ်ထဲမှာပဲအေးဆေးနေတတ်သူလေးတွေဖတ်ဖို့!!! In:Kawi Inspires, Movies | Books | Apps
သင်္ကြန်က အရင်တုန်းကလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရေပက်ကြတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲ EDM ပွဲတွေလိုဖြစ်လာကြပြီဆိုတော့ EDM မကြိုက်တဲ့သူတွေက ဘယ်အပြင်ထွက်ချင်ကြတော့မလဲနော်။ အဲဒီတော့ အိမ်မှာနေရင်း စာဖတ်ဖို့စိတ်ကူးနေတယ်ဆိုရင် ဘာစာအုပ်တွေဖတ်ရမလဲဆိုတာ ကဝိတို့ကညွှန်းပေးမှာပေါ့။ စာအုပ်က (၇) အုပ်တောင် ညွှန်းပေးထားမှာမလို့ ကိုယ်ကြိုက်လောက်မယ့် စာအုပ်လေးတွေရွေးပြီးဖတ်ကြည့်နော်။ စာဖတ်လေ့ဖတ်ထမရှိသေးတဲ့သူတွေဆိုရင်တောင် စာဖတ်တဲ့အလေ့အကျင့်ပါ တစ်ခါတည်းရသွားတာပေါ့။ ၁) မင်းလူ – သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အကြောင်း ဒီစာအုပ်လေးက ခေါင်းစဉ်လေးအတိုင်းပဲ ဆရာမင်းလူက သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အကြောင်းရေးထားတာပါ။ စီးပွားရေးအမြင်ရှိလှတဲ့ သူငယ်ချင်း စိန်ကြောင် အကြောင်းပေါ့။ သူ့ရဲ့စီးပွားရေးမြင်တတ်ပုံကလည်း အရမ်းကို အံ့အားသင့်စရာကောင်းတာမလို့ ဗဟုသုတလည်းရပါတယ်။ သူက ကျောင်းတုန်းကဆို အရမ်းအစအနောက်သန်တာမလို့ မိန်းကလေးတွေအကုန်လုံးကကြောက်ကြရတယ်။ နောက်ပြီး ကျောင်းမှာကတည်းက သူကစီးပွားရေးအသေးစားလေးတွေကို စလုပ်နေပြီ။ စိန်ကြောင်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ပုံတွေနဲ့ ကြုံရတဲ့ရယ်စရာ တွေကို ဆရာမင်းလူရဲ့ရေးသားဟန်နဲ့ရေးထားတဲ့အခါမှာတော့ အတော့်ကို ဗဟုသုတလည်းရပြီး ရယ်မောစရာလည်းကောင်းတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့။ ………………………………………………………………………………………………… ၂) မစန္ဒာ – ဘဝအိပ်မက်ပန်းအိပ်မက် ဘယ်သောအခါမှ ကံမကောင်းခဲ့တဲ့ ဦးဘပွားဆိုတဲ့လူကြီးဟာ ဇနီးသည် နဲ့ သားသမီး(၃)ယောက်ရဲ့အချစ်ကိုမရခဲ့သူတစ်ယောက်။ ကံမကောင်းတဲ့ ဦးဘပွားကိုပိုပြီး ကံမကောင်းစေခဲ့တဲ့ အကြောင်းကတော့ အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါရှိနေကြောင်း သိရှိခဲ့ရတာပါ။ အသက်ရှင်ဖို့ရက်သိပ်မရတော့တဲ့ ခြောက်ကပ်စရာနေ့ရက်တွေကို တစ်စုံတစ်ခုက အသက်ပြန်သွင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအရာက??? ………………………………………………………………………………………………… ၃) ကြည်အေး – နွမ်းလျအိမ်ပြန် ဘဝကံအကျိုးမပေးတဲ့ တင်မေမှာ စကားနဲ့ပြောမပြနိုင်လောက်အောင် ဘဝကနာလွန်းလှတယ်။ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာပဲ အဖေက အဒေါ်ဆိုတဲ့သူနဲ့ ဖောက်ပြန်တဲ့အတွက် တင်မေတစ်ယောက် အမေ၊ အမနဲ့အတူ အိမ်ပေါ်ကဆင်းလာခဲ့ရရှာတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ အားကိုးစရာ ဆရာအောင်မင်း ပေါ်လာလို့တော်သေးပေမယ့် ဘဝနာခဲ့ရတဲ့ တင်မေ က သာမန်မိန်းကလေးတွေလို ဘဝကို လှတပတနဲ့မဖြတ်သန်းနိုင်တော့တဲ့အခါမှာ … ………………………………………………………………………………………………… ၄) မိုးမိုး(အင်းလျား) – ငြိမ်းကိုရှက်ပါ ဇာတ်သဘင်မှာ ဇာတ်ကတာကို ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်အနေနဲ့ထိုင်ကြည့်ဖူးတယ်မလား?? ငြိမ်းကတော့ လောကဇာတ်ခုံမှာ သူကိုယ်တိုင်ပါ၀င်နေတာတောင် ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့သာ ထို်င်ကြည့်နေခဲ့ရတဲ့ငြိမ်းပါ။ အဖေ၊ အမေ၊ အမ ဘယ်သူမှဖေးမခေါ်ယူပြီး အတူကဖို့ခေါ်ယူမခံရတဲ့ငြိမ်း။ လူသေတစ်ယောက်လို သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ငြိမ်းက ဘဝကို ဘယ်လိုခါးသီးစွာ ဖြတ်သန်းနေရလဲဆိုတော့ … ………………………………………………………………………………………………… ၅) သော်တာဆွေ – ပပဝတီ ဆရာသော်တာဆွေရဲ့စာအုပ်တွေ ဖတ်ဖူးတဲ့သူတွေကတော့သိကြမှာပါ။ ဆရာက သူရေးနေကျအတိုင်း ဂေါ်ပိုးတဲ့အကြောင်းရယ် ဂယက်ဖြစ်ပုံလေးတွေရယ်ကို ပေါင်းရေးထားတာပေါ့။ ဒီစာအုပ်လေးမှာလည်း ဂေါ်မစွံတဲ့ ဆရာ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူပိုးနေတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့အောင်သွယ်ခိုင်း၊ ခက်တာကကောင်မလေးက သူ့အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ ကောင်မလေးး။ အဲဒီတော့ တပည့်တော် ပေါ်ဦးဆီက အကြံတွေတောင်းရတော့တာပေါ့။ ပေါ်ဦးအကြံပေးတာက သူတို့နှစ်ယောက်နီးစပ်ဖို့ဆိုတာက တင်မောင်ကိုရဲ့ ဦးကြီးသဘောတူမှဆိုတော့ ဦးကြီးကို အစေခံမလေးတွေတို့၊ စျေးသည်မလေးတွေတို့အကြောင်းရေးထားတဲ့ ပပဝတီအမည်ရှိ စာရေးသူရေးထားတဲ့ ၀တ္ထုတွေဖတ်ပြဖို့ပေါ့။ နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီစာရေးသူ ပပဝတီအဖြစ် ဆရာကိုယ်တိုင် ဟန်ဆောင်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါမှာတော့ … ………………………………………………………………………………………………… ၆) မင်းလူ – ချစ်သောပန်းကလေး ဘူမိဗေဒကျောင်းသားတွေ ကွင်းဆင်းခရီးသွားရတဲ့အခါ ဘယ်လောက်တောင်ပင်ပန်းဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေ၊ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေ၊ လဲကျသွားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို ဘယ်လိုဖေးကူရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ၊ ဒေသခံတွေရဲ့အကူအညီပေးပုံအကြောင်းတွေရေးထားတာပါ။ ဘူမိကျောင်းသားတွေဆို သိပ်စိတ်ဝင်စားကြမယ့် စာအုပ်လေးပေါ့။ နောက်ပြီး ဘူမိကျောင်းသားတစ်ယောက် က ရိုးသားလှတဲ့ ဒေသသူလေးကိုကြိုက်မိသွားတဲ့အခါ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပိုးပန်းတဲ့ပုံလေးတွေကို ဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ………………………………………………………………………………………………… ၇) ရွှေဥဒေါင်း – စုံထောက်မောင်စံရှား စုံထောက်မောင်စံရှားစာအုပ်တွေက Sherlock Holmes ၀တ္ထုတွေကို မြန်မာမှုပြုပြီး ဘာသာပြန်ထားတာပါ။ မြန်မာစာဖတ်သူတွေဖတ်ရလွယ်အောင် ဆရာ့ရဲ့ဘာသာပြန်အတတ်ပညာတွေနဲ့ ချောချောမွတ်မွတ်ဖြစ်အောင် ဘာသာပြန်ထားတာကြောင့် မတူညီတဲ့ဓလေ့တွေကိုတောင် ဖတ်ရတာစိမ်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ စုံထောက်ဆိုတဲ့အတိုင်း ထူးထူးဆန်းဆန်းအမှုတွေကို လိုက်စုံထောက်ရတာကြောင့် သည်းထိတ်ရင်ဖိုနဲ့ဖတ်ရအလွန်ကောင်းပါတယ်။ ၀တ္ထုတိုပေါင်းချုပ်တွေဆို စျေးလည်းများပြီး ထူလည်းထူတာကြောင့် အခုလို အတွဲလေးတွေခွဲထွက်ထားတဲ့ စာအုပ်လေးတွေဆို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဖတ်ရတာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်နော်။ ဒီလောက်ဆို သင်္ကြန်မှာ အိမ်တွင်းပုန်းလေးတွေအနေနဲ့ ပျင်းနေစရာ မလိုတော့ဘဲ စာအုပ်ထဲက ရသလေးတွေကို ခံစားပြီး ရယ်စရာ၊ ဗဟုသုတရစရာတွေနဲ့ ကုန်ဆုံးနိုင်ပြီပေါ့!!! ...
Doodle art တွေကိုရူးသွပ်တဲ့ အောင်ခန့်!!! In:Kawi Inspires, Movies | Books | Apps, Self Discovery
အောင်ခန့်ကတော့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး doodle art တွေဆွဲရတာကို ရူးသွပ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ Doodle art ကို တချို့သူတွေက ကလေးပန်းချီလို့ပြောကြပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ doodle art တွေက ထင်ထားတာထက်ကို ပိုပြီးလေးနက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့က မိနစ်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်တွေကို အခြေခံပြီး ပုံဖော်ထားတဲ့ ပန်းချီတွေမို့လို့ပါ။ ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင် စာသင်ခန်းထဲမှာ ကို်ယ်စိတ်မဝင်စားတဲ့ သင်ခန်းစာတစ်ခုကို နားထောင်နေရတဲ့အချိန် ဖတ်စာအုပ်အနားတွေ၊ စာအုပ်ထောင့်လေးတွေမှာ ဆွဲဖြစ်သွားတဲ့ ရုပ်ပုံလေးတွေ၊ ကနုတ်ပန်းတွေ စတဲ့ ပန်းချီပုံရိပ်တွေကစလို့ doodle art လို့ခေါ်တာပါ။ နောက်ပြီး ဒီ doodle art တွေကနေတစ်ဆင့် ပန်းချီပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ပြီး ဆွဲထားတဲ့လူရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကိုပါ ခန့်မှန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ၁. ပန်းငယ် ၂. လေထဲက အတွေး ၃. ဖယောင်းတိုင် ၄. လူတစ်မျိုး အောင်ခန့်ကတော့ doodle art ကို စတိုးဆိုင်လေးတွေကပြန်ပေးလိုက်တဲ့ ဘောင်ချာစာရွက်တွေမှာတောင် ဆွဲတဲ့အထိကို ရူးသွပ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့အလုပ်စားပွဲခုံပေါ်မှာဆိုရင် ဘောင်ချာအဟောင်းတွေကို မလွှင့်ပစ်ဘဲ doodle art လေးတွေဆွဲပြီး တင်ထားတတ်တာကြောင့် ရှုပ်ပွနေတတ်ပါတယ်(ဒီလို ရှုပ်ပွနေတတ်လို့လည်း တစ်ခါတလေအဆူခံရပါသေးတယ်)။ နောက်ပြီး သူ့ရဲ့ doodle art တွေက ပုံတွေတင်မဟုတ်ဘဲ သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကို ဖော်ပြတဲ့ ခံစားချက်စာသားလေးတွေပါ ပါဝင်တာဆိုတော့ ပုံလေးတွေကိုပိုပြီး အသက်ဝင်သွားစေပါတယ်။ ခံစားချက်စာသားတွေကလည်း ရင်ထဲကိုရောက်သွားလောက်အောင် ထိတယ်နော်။ အဲဒါကြောင့် အလွမ်းဓာတ်ခံရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ ဖတ်ပြီး ခံစားနေရရင် တာဝန်မယူဘူးနော်… ...
သင်္ကြန်အိမ်တွင်းပုန်းတွေအတွက် “ကဝိ” က recommend ပေးလိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲများ In:Kawi Inspires, Movies | Books | Apps
ဟေ့… သင်္ကြန်အိမ်တွင်းပုန်းမယ့် ကိုကိုမမတို့ရေ! ပိတ်ရက် ၅ ရက်မှာ ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတာ plan ပြီးကြပြီလား? ဘာမှမစီစဉ်ရသေးရင်တော့ အခုပြောပြမယ့် series အသစ်တွေနဲ့ အခန်းထဲမုန့်အပြည့်ဖြည့်၊ တံခါးလော့ချပြီးသာကြည့်ဖို့ ပြင်လိုက်တော့နော်။ Series တွေအပြင် ဇာတ်လမ်းဟောင်းတွေ ပြန်ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း movie marathon လို့ရမယ့် ရုပ်ရှင်ကားတွေကို အောက်မှာ list လေးလုပ်ထားပေးတယ်နော်။ ၁။ The Order ဒါကတော့ Netflix ရဲ့ original ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ။ လတ်တလော အရမ်းဟော့နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ Jack က Belgrave တက္ကသိုလ်က လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတွေ မှော်အတတ်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ club တစ်ခုကို join ပြီး သူ့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့သေဆုံးမှုကို လက်စားချေဖို့အတွက် secret order တစ်ခုကို လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ မထင်မှတ်ဘဲ werewolf တွေ practitioners တွေရဲ့ စစ်ပွဲတွေကြားကို ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့…. နောက်ဆက်တွဲ လူသတ်မှုတွေ၊ ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေကို thriller ဆန်ဆန်ကြည့်လို့ရမယ့် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ။ ……………………………………………………………………………………………….. ၂။ The Umbrella Academy ၁၉၈၉ ခုနှစ်် အောက်တိုဘာလရဲ့ နေ့တစ်နေ့မှာ ထူးဆန်းစွာနဲ့ အကြောင်းအရင်းမရှိဘဲ ကလေး ၄၃ ယောက် တစ်ချိန်တည်းမှာ မွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ်။ Billionaire တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Reginald Hargreeves က ကလေး ရ ယောက်ကိုသာ မွေးစားခဲ့ပြီး Umbrella Academy ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ Reginald Hargreeves က ဒီကျောင်းထဲမှာ သူ့ကလေးတွေအားလုံးကို လူစွမ်းကောင်းတွေဖြစ်ဖို့ သင်ကြားပေးခဲ့ပေမယ့် ကလေးတွေကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့ မတူညီတဲ့အမူအကျင့်တွေကြောင့် သူတို့ ရ ယောက် လမ်းတွေကွဲပြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့မွေးစားဖခင်ဖြစ်တဲ့ Reginald Hargreeves သေဆုံးပြီးချိန်မှာ ဖခင်သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုကို ဖော်ထုတ်ကြဖို့အတွက် ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခဲ့ကြတဲ့အခါမှာတော့ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ့် လူသတ်မှုတွေနဲ့ သူတို့ကြားက မတူထူးခြားတဲ့ စရိုက်တွေကြောင့် ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ပြီး အမှုတွေကို ဖော်ထုတ်ကြမလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီ series လေးမှာပဲဆက်ကြည့်လိုက်နော်။ ……………………………………………………………………………………………….. ၃။ iZombie iZombie ကတော့ အားလုံးပေါင်း season (၄) ခုရှိပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာဆိုရင် Liv Moore (Rose Mclver) ကတော့ အဓိကသရုပ်ဆောင်ပေါ့။ သူမ တစ်ည boat party တစ်ခုကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ ထူးဆန်းတဲ့ မူးယစ်ဆေးတစ်ခုကြောင့် သုံးမိသူတိုင်း zombie တွေအဖြစ်ပြောင်းသွားပြီး ကျန်တဲ့သူတွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ သူမကတော့ ဆေးမသုံးမိပေမယ့် zombie တစ်ယောက်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် မသေဘဲ zombie တစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ လူအသွင်ကို ထိန်းထားဖို့ဆိုရင် လူဦးနှှောက်စားပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အလောင်းခွဲစိတ်ဌာနမှာ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တစ်ယောက်အဖြစ် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဦးနှောက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုစားပြီးတိုင်း အဲဒီသူရဲ့ မှတ်ဉာဏ်တွေကို သိနိုင်တာကတော့ သူ့အစွမ်းပေါ့။ သူမရဲ့ဒီအစွမ်းကို သုံးပြီး စုံထောက်ဖြစ်သူ Clive နဲ့အတူ အမှုတွေကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ဖော်ထုတ်ကြမယ်ဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲဆက်ကြည့်လိုက်ကြနော်။ ……………………………………………………………………………………………….. ၄။ Siren Bristol Cove ဆိုတဲ့ ကမ်းနားမြို့တစ်မြို့ဟာဆိုရင် တစ်ချိန်က ရေသူမတွေနေတဲ့မြို့ဆိုပြီး နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ မြို့တစ်မြို့ပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့ ထူးဆန်းတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ေယောက်ရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ တစ်ချိန်က ဒဏ္ဍာရီတွေ တကယ်အသက်ဝင်လာခဲ့ပြီး လူသားနဲ့ပင်လယ်ကြားက တိုက်ပွဲတွေပြန်စလာတဲ့အခါမှာတော့ ဒီအသားစားရေသတ္တဝါတွေက သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ပြန်လည်ရယူဖို့ ပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့….. သိချင်ရင် ဇာတ်လမ်းထဲမှာပဲ ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့နော်။ ……………………………………………………………………………………………….. ၅။ Riverdale တစ်ချိန်က အေးချမ်းခဲ့တဲ့ Riverdale မြို့ဟာဆိုရင် မြို့ရဲ့အင်အားကြီးမိသားစုတစ်စုရဲ့ သားဖြစ်သူ Jason Blossom ထူးဆန်းစွာ သေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ လုံးဝပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ Archie နဲ့ သူငယ်ချင်းအုပ်စုကတော့ နေ့စဉ်ဘဝမှာရုန်းကန်ရင်း စိတ်ခြောက်ခြားစရာကောင်းတဲ့ Jason Blossom ရဲ့သေဆုံးမှုကို ဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ ဒီလူသတ်မှုကို ဖော်ထုတ်ရင်း အေးချမ်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ Riverdale ရဲ့ နက်နဲတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေပါ ဘယ်လို ပေါ်ပေါက်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်ခံအေးအေးနဲ့ thriller ဆန်ဆန်ဇာတ်လမ်းကိုသာကြည့်ပြီး ရှာဖွေလိုက်ကြတော့နော်။ ……………………………………………………………………………………………….. ၆။ Memories of the Alhambra ဒီကားထဲမှာတော့ မင်းသမီး Park Shin Hye နဲ့ Ahjussi ချောချောလေး Hyun Bin တို့အပြင် အရံအနေနဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပျိုတိုင်းကြိုက် Park Chanyeol တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ fantasy ဆန်ဆန်ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာဆိုရင် Yoo Jin Woo (Hyun Bin) က Software Engineer တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် Gaming ပိုင်းမှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူတစ်ယောက်ပါ။ တစ်နေ့မှာ အလယ်ခေတ်စစ်ပွဲတွေကို အခြေခံပြီး တီထွင်ထားတဲ့ AR ဂိမ်း တစ်ခု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Yoo Jin Woo (Hyun Bin) ဆီကို email တစ်စောင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ သူက ဂိမ်းကိုအရမ်းစိတ်ဝင်စားသွားပြီး တီထွင်သူဖြစ်တဲ့ Jung Se-joo (Park Chanyeol) ကို ရင်းနှီးမြုပ်နံဖို့ သွားရှာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Se-joo ကပျောက်နေခဲ့တော့ သူ့ရဲ့အမဖြစ်သူ Jung Hee-joo (Park Shin Hye) နဲ့ပဲတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲလိုမထင်မှတ်တဲ့ ဆုုံတွေ့မှုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ထူးဆန်းတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကြောင့် Se-joo ထွင်ခဲ့တဲ့ AR ဂိမ်းက တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ထူးခြားတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းနဲ့ Se-joo တစ်ယောက်ရော ပြန်ပေါ်လာပါ့မလား ဆိုတာကိုတော့ ပိတ်ရက်မှပဲ ကြည့်လိုက်တော့နော်။ ……………………………………………………………………………………………….. ၇။ Clean with Passion for Now ဒါကတော့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ အမည်တူနာမည်ကြီး Webtoon ကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ မင်းသားအနေနဲ့ကတော့ Yoon Kyun-sang က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး မင်းသမီးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ တစ်ချိန်ကအရမ်းဟော့ခဲ့တဲ့ Moonlight Drawn by Clouds ဆိုတဲ့ကားထဲက မင်းသမီးလေး Kim Yoo-jung က သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။ ဒီကားထဲမှာဆိုရင် Jang Sun-gyeol (Yoon Kyun-sang) က သန့်ရှင်းရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး တရားလွန်အသန့်ကြိုက်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ နောက်ပြီး သူ့ရဲ့ပါရမီဖြည့်ဖက်ဖြစ်လာမယ့် Gil Oh-sol (Kim Yoo-jung) ကတော့ အရမ်းညစ်ညစ်ပတ်ပတ်နေတတ်ပြီး ထူးဆန်းတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပေါ့။ ဒီလို လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့သူနှစ်ယောက် မထင်မှတ်တဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေနဲ့ ဘယ်လို romantic ဆန်တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေ ဖန်တီးကြမလဲဆိုတာကိုတော့ အူတက်အောင်ရယ်ရင်း ဇာတ်လမ်းလေးမှာပဲ ဆက်ပြီးရှှုစားလိုက်ပါတော့နော်။ ……………………………………………………………………………………………….. ၈။ The Last Empress ဒါကတော့ thriller ဆန်ဆန် drama ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ် အုပ်ချုပ်ပုံကို အခြေခံပြီး ရိုက်ထားတာပါ။ ဒီကားထဲမှာဆိုရင် ပြဇာတ်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Oh Sunny (Jang Na-ra) တစ်ယောက် ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ Lee Hyuk (Shin Sung-rok) နဲ့ ရုတ်တရတ် လက်ထပ်လိုက်ရပါတယ်။ မင်းကြီးရဲ့အဖွားဖြစ်သူ သေဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ သူမဟာ တရားခံအဖြစ်စွပ်စွဲခံခဲ့ရပါတယ်။ အညှိုးတွေ၊ မုန်းတီးမှုတွေကို တိုက်ခိုက်ရင်း မိခင်မတရားသေဆုံးခဲ့မှုအတွက် ကလဲ့စားချေဖို့ ဘုရင့်သက်တော်စောင့်အဖြစ် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ Cheon Woo-bin (Choi Jin-hyuk) နဲ့ သံယောဇဉ်ငြိတွယ်သွားတဲ့အခါ… သူတို့သုံးယောက်ရဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်းကို ရင်တုန်တုန်နဲ့ကြည့်ရမှာပါ။ ……………………………………………………………………………………………….. ၉။ Kill It ဒါကတော့ romance ထက် thriller ပိုဆန်တဲ့ စုံထောက်ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ Kim Soo-hyun (Chang Ki-yong) ကတော့ ကြေးစားလူသတ်သမားတစ်ယောက်ပါ။ Professional ကျတဲ့ လူသတ်သမားတစ်ယောက်ပေါ့။ ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ လူဆိုးဂိုဏ်းတွေက သူ့ကို ပိုက်ဆံပေးပြီး ငှားလေ့ရှိကြပါတယ်။ သူက လူသတ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် တကယ်တော့ မေတ္တာငတ်နေသူတစ်ယောက်ပါ။ ဆရာဖြစ်သူ Pavel သေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူ့ရဲ့မိသားစုကိုရှာဖို့အတွက် လူသတ်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Do Hyun-jin (Nana) ကတော့ သိပ်တော်ပြီး သွေးအေးတဲ့ စုံထောက်မတစ်ယောက်ပါ။ တစ်နေ့ သူမရဲ့ချစ်သူသေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကွင်းဆက်လူသတ်မှုကိုလိုက်ရင်း Kim Soo-hyun နောက်ကိုပါ လိုက်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါ… သူတို့နှစ်ယောက်ကြားက ဆက်နွယ်မှုတွေ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ သွေးသံရဲရဲနဲ့ လူသတ်မှုတွေကြားမှာ ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ပါနော်။ ……………………………………………………………………………………………….. ၁၀။ Priest (2018) Priest (2018) ကတော့ horror ပရိသတ်တွေအတွက် လုံးဝကြမ်းတဲ့ သဘာဝလွန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ။ ဒီကားထဲမှာဆိုရင် Oh Soo-min (Yeon Woo-jin) က အသက်ငယ်ရွယ်ပြီး စိတ်အားထက်သန်တဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးနှိမ်နင်းတဲ့ အဖွဲ့ဝင် Catholic ဘုန်းကြီးတစ်ယောက်ပါ။ သူ့မိခင် သေဆုံးပြီးချိန်ကတည်းက Moon Ki-sun (Park Yong-woo) ဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးရဲ့သင်ကြားမှုတွေနဲ့အတူ ကြီးပြင်းလာသူတစ်ယောက်ပေါ့။ နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ Ham Eun Ho (Jung Yu-mi) ကတော့ ဆရာဝန်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဘုရားကိုယုံကြည်သူတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်နေ့ ဆေးရုံကို ဝိညာဉ်စွဲကပ်နေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရောက်လာပြီးနောက် Oh Soo-min ရဲ့ ဝိညာဉ်နှိမ်နင်းမှုကို သူမမျက်စိနဲ့ တပ်အပ်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူမရဲ့ဘဝကြီး ဘယ်လိုပြောင်းလဲလာမလဲဆိုတာကို အော်သံတွေ၊ စိတ်ခြောက်ခြားမှုတွေနဲ့အတူ ခေါင်းဦးပိုက်ပြီးသာ ကြည့်လိုက်တော့နော်။ ……………………………………………………………………………………………….. အောက်မှာဖော်ပြထားတာကတော့ အသစ်တွေမဟုတ်ဘဲ ဇာတ်လမ်းဟောင်းတွေကို ပြန်ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် movie marathon လို့ရမယ့် ရုပ်ရှင်ကား (၁၀) ကားပါ။ အရမ်းလန်းတဲ့ Game of Thrones ဇာတ်လမ်းရဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့ GOT season 8 ကလည်း ဒီ April ၁၄ မှာထွက်မှာဆိုတော့ လုံးဝလက်လွှတ်မခံသင့်ဘူးလေနော်။ ဒါကြောင့် သဘောကျနှစ်သက်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ၁။ Harry Potter (1 to 7) ၂။ Pirates of the Caribbean (1 to 4) ၃။ The Lord of the Rings (1, 2, 3) ၄။ The Hangover (1, 2, 3) ၅။ Game of Thrones (Season 1 to 8) ၆။ The Chronicles of Narnia (1 to 4) ၇။ The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War ၈။ Star Wars (1 to 8 +2prequels) ၉။ Fast & Furious (1 to 8) ၁၀။ The Hobbit (1, 2, 3) ဒီလိုဆို အလန်းစား K-drama တွေနဲ့ English Series အသစ်တွေအပြင် movie marathon လို့ရမယ့် ရုပ်ရှင်ကား (၁၀) ကားကိုလည်း သိပြီဆိုတော့ သင်္ကြန်အမီ အခွေတွေ data တွေဝယ်ပြီး စုထားလိုက်တော့နော်! ...